Ifektri engu- Submersible Pump - Abakhiqizi baseChina abasebenza ngaphansi, abahlinzeki
Isetshenziselwa ubunjiniyela bakamasipala, izakhiwo, ukukhishwa kwezimboni nokwelashwa kwendle ukukhipha indle, amanzi angcolile kanye namanzi emvula aqukethe izinto eziqinile nemicu eqhubekayo.
Uchungechunge lwe-WL lwamapampu endle amancane amile mpo asetshenziswa kakhulu kwezobunjiniyela bakamasipala, ekwakheni izakhiwo, ezindle zendlu kanye nasekwelashweni kwendle. Zingasetshenziselwa ukukhipha indle, amanzi angcolile, amanzi emvula kanye nendle yasemadolobheni equkethe izinhlayiya eziqinile kanye nemicu emide eyahlukahlukene.
I-WQ / ES ilula yokugaya ipayipi lendle elicwilisiwe lisetshenziswa kakhulu kwezobunjiniyela bakamasipala, ekwakheni izakhiwo, ezindle zezimboni kanye nasezikhathini zokuphathwa kwendle ukukhipha indle, amanzi angcolile kanye namanzi emvula aqukethe okuqinile nemicu emifushane.
Isetshenziselwa ikakhulukazi indawo yokuhlanza indle, isiteshi samaphampu sokuphakamisa indle kamasipala, imisebenzi yamanzi, amanzi okugcina amanzi kanye nokunisela, iphrojekthi yokuphambukisa amanzi, isiteshi sephampu esihlanganisiwe, njll.
● Ubunjiniyela bukaMasipala
● Ukwakhiwa kwezakhiwo
● indle yasemanzini
● Izikhathi zokuphathwa kwendle lapho kukhishwa indle
● Amanzi angcolile kanye namanzi emvula aqukethe okuqinile nemicu emifushane